Kukosha Words — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Words zvinokosha. Tinoshandisa mashoko kukurukura neshamwari dzedu uye mhuri. Tinoshandisa mashoko edu kuitisa mabhizimisi. Ndinoshandisa mashoko kuisa nziyo pamwe uye chouviri. Tinoshandisa mashoko kuranga vana vedu. Enyika vanoshandisa mashoko kwamuri vabvume kuti vakanakisa kukwikwidza kuti basa. Mashoko guru chikamu zvose zvatinoita muupenyu hwedu. Ndine mwanakomana idzva. Zvakaoma kurarama munhu vhiki nomwe okuberekwa, ainyanya nokuti havagoni kutaura. Saka dzimwe nguva ndinoda kumubatsira asi handizivi sei nekuti haagoni kutaura nemashoko asi. Zvakaoma kufungidzira nyika isina mashoko.
Avhareji munhu anoti pamusoro 16,000 Mashoko pazuva. Ndizvo 112,000 Mashoko vhiki imwe neimwe. Ndizvo pamusoro mashoko mamiriyoni mashanu gore roga roga. Tinoshandisa mashoko. Zvizhinji.
Uye chinhu kuti pane yakawanda anotanga kuti undervalued. Kukosha chinhu kuchinja kwakavakirwa sei zvakawanda nezvazvo pane. Kana paine 100 Cookies patafura pashure basa unogona kuramba kutaura kwechinguvana. Asi kana paine Cookies mashoma, vanoita anokosha. Uchawana tichimhanya uko kana wasvikako mumwe nguva, vanoruma zvakawanda chinotapira. Nekuti isu kunzwa uye kushandisa mashoko mazhinji saka zuva nezuva hazvirevi zvikuru kwatiri. Asi tinofanira kuvaona sezvo anokosha.
Pamwe tinofunga chete here zvinhu zvinokosha tikati dzinokosha. Pamwe tinofunga chete chii tinonyora pasi, kana chete kana tiine groundbreaking kukurukurirana kana chete kana tichiti zvatiri chaizvo kufunga mashoko edu basa. Ndinofunga kwedu ndima manheru ano nevapenyu chinhu chakasiyana zvikuru. Dzokerai neni Matthew 12:36.
Asi ndinokuudzai kuti vanhu vachafanira rondedzero pazuva rokutongwa nerimwe ravakataura risina shoko ivo ndazvitaura. (Matthew 12:36)
Jesu anoti mashoko aya mukati kukurukura nevaFarisi, pashure ivo vachimupomera achibudisa madhimoni naSatani. Uye saka Jesu rinonyanya anovaudza kuti vari zvakaipa, uye haagoni kutaura chinhu chakanaka (Iye ane mutsa nzira namashoko). Anovaudza kuti vose mashoko edu ndiwo zvibereko chii midzi mumwoyo yedu.
Uye ipapo anodzika kuti bhomba pamusoro pedu. Kuti tichafanira kuzvidavirira kuna Mwari zvose hanya neshoko tinotaura. Izvi hazvirevi chete zvinoshanda vaFarisi. Ichokwadi kuti mumwe chete wedu. Zvino ndima inotevera chinotova inotyisa. Anoti, "Nokuti namashoko ako uchapembedzwa, uye nemashoko ako uchapiwa mhosva. " asi nei? Nei mashoko edu zvokuti kukosha? Sei isu nemhosva kana mhosva kunobva chinhu zviduku sezvo mashoko tikati?
Anoita kuti pachena apfuura apo anoti, "Kubva nokupararira mumoyo muromo unotaura." Wakambofunga zvisiri kutongwa? Somunhu akabatwa iwe nezuva zvakaipa pawaiva unopenga uye akatongwa unhu yako yose pazuva iroro rimwe? Well kutongwa nemashoko edu haasi kufanana. Hakusi kufanana mashoko vanongova chinoumba chimwe chimiro chedu kuti havatsananguri isu. Tinogona kuva zvakarurama kutongwa nemashoko edu nekuti ivo iimba Kufungisisa yakarurama kuitika mumwoyo yedu.
Zvinenge kufanana ndiri akabata mukombe, hauzivi zviri imomo. Ndaigona ndinokuudzai mvura iri imomo, kana muto zviri imomo. Asi kana ini pokumubatira vosasa kana kurasika vamwe kuti zvokunwa, uchaziva chaizvo zviri imomo. Ndizvo nemashoko edu uye yedu. Patinotaura, zviri yedu iri vachiteura panze. Mashoko edu nguva dzose zvinoratidza zviri mumwoyo medu, zvingava zvakanaka kana zvakaipa. Uye sezvo Paul Tripp, Munyori Ndakaverenga vhiki rino, akati, "Hauna kumbobvira ataura zvisina kwazvakarerekera shoko muupenyu hwako."
Held nokuda kwemashoko edu
Ose zvino uye ipapo munhu achawira mariri patepi vachiti chinhu havana vangadai vakati pachena. Izvi zvakaitika kuna President Obama apo aitaura kuti President kweRussia. Izvi zvakaitika kuna backer Romney vakati- svondo rapera. Havana kutarisira kuti vaita mashoko iwayo, asi vakanga. Saizvozvowo, tinofunga hatizomboodzwi vaita mamwe mashoko tinotaura. Tinofunga tinotaura zvinhu, uye it's aita, asi ivo vachadzoka kwatiri kuruma. Zvinoita sokuti Mwari ane zvakavanzika makamera zvose pamusoro pezvisikwa.
Pane zuva - rugwaro unoritumidza zuva rokutongwa - apo tichamira pamberi Mutongi mutsvene yose zvakasikwa. Zvino isu Mashoko edu vachamira sezvapupu - kana achipupura kwatiri kana kuzorwa nesu. Uchapupu zvichakurukurwa.
Mwari achaita kutarisa nzira takataura vabereki vedu sezvo mwana uye nzira tinotaura vakaroorana edu kana mabhosi sezvo vakuru. Mwari tichaongorora nzira takataura vatorwa mumugwagwa. Mwari achaita kuongorora majee takaudza yedu vabatiri. Mwari achaita comb they kuburikidza kwedu akatsamwa rants vari motokari pamusoro nemotokari kushanda. Achatora kunyange Mupumburu kuburikidza chii isu vataipa on Facebook uye Twitter. tinotumira muna mameseji kana na Kunyange mashoko. Rega shoko.
Unoona Jesu haritauri tichafanira rondedzero nokuda mashoko anokosha tinotaura. Anoti, "Kusava shoko rose." Shoko rakashandiswa tadza kubata zvakanaka rinoshandurwawo sezvo usimbe kana hakubatsiri. shoko rimwe nerimwe, hazvinei kuti vasingakoshi uchifunga kuti. The-achiziva zvose Mwari takataura pamusoro ichi mangwanani, anoziva Shoko ose rwatakambowana kutaurwa.
Uye pano Ndicho chinhu. mumwe chete Shoko vasingadi zvakakwana isu mhosva. Ndeupi Chokwadi nzira, tose zvedu tinofanira mhosva mashoko edu.
Zvakanaka pane mashoko matatu, hwakataurwa naShe Jesu Kristu, kuti supersede ose shoko hanya ndava nokusingaperi kutaurwa. Mashoko iwayo vatatu "It. Is. Vapedza. "Pashure pokurarama upenyu hwakakwana, pashure kuva chete akashandisa mashoko ake nenzira vakarumbidza Mwari, Jesu akaenda pamuchinjikwa. Zvino wakati akarembera pamuchinjikwa, akafa kunyange zvivi matauriro edu. Uye akamuka mazuva matatu gare gare.
Uye vaya vanoisa kutenda kwedu muna Kristu, ehe, pane vachingozvikurudzira mashoko ratiri akataurwa kuti tiri chibereko ukama hwedu Kristu. Uye mashoko iwayo vachange kupupura nyasha yedu. Asi taizongoramba mhosva nemamwe mashoko ose. Nokurumbidza Mwari kuti ropa raShe Jesu anofukidza mashoko iwayo. Kana usingazivi Jesu, kutsauka kubva zvivi zvenyu uye kuvimba chete anogona kukanganwira kwamuri zvose zvivi zvako, kusanganisira zvitadzo matauriro ako.
Naizvozvo sezvo vatendi, kunyange isu hatingazvirumbidzi mhosva mashoko edu, tinenge tichiri kupiwa nokuda kwavo. Tichatevera vachiri kupindura kuna Mwari nokuda kwavo uye tinogona kurasikirwa mibayiro Mudenga.
Vamwe vedu vanongwarira chaizvo nemari yedu. Tinoita zvemari, isu Zvinodzikamisana chequebook edu, tinochengeta pakutengeserana dzedu, uye tinotarisa yedu paIndaneti Billing mitsara. Nokuti tinoziva zvakawanda zviri mungozi. Isu tinoziva kuti mutariri mari yedu zvakanaka.
Zvakanaka kuti mhando imwechete kungwarira, uye kukarukureta inofanira kushandiswa nzira tinoshandisa mashoko edu. Nokuti zvizhinji zviri mungozi. Uye isu achazvidavirira kuna Mwari nokuda mumwe nomumwe mashoko edu. Tinofanira kuva sevatariri vakanaka mashoko atinoshandisa.
Mashoko edu akafanana sando. Tinogona kusina uku akavapotedza uye kuputsa zvinhu. Kana tinogona kushandisa navo nokungwarira kuvaka zvinhu. Sei Ungashandisa mashoko ako svondo rino? zvimwe sei taishandisa mashoko edu vhiki rino zvekare agotiratidza kuti taigona kuzvishandisa svondo rino kuuya, kana chinhu kuchinja.
Saka ndinoda kupa nzira nhatu dzatinogona kushandisa mashoko edu zvakanaka.
ini. Taura Mwari
Ye 16,000 tinoshandisa mashoko ose zuva, isu kungava kuchenjera kushandisa vazhinji vari kukurukura naMwari. Jesu akatipa kuwana Baba, uye tinofanira kuuya noushingi pamberi chake choumambo kazhinji. madzimai edu ave nezvinetso yokuva vateereri vakanaka, asi Mwari haadaro. Anogara anonzwa minyengetero yedu. Saizvozvo, Iye vanonyatsoiteerera chaizvo.
Kazhinji kana tava kuburikidza chinhu chakaoma, chinhu chokutanga chatinofanira kuita chete vhendi neshamwari nemhuri. Kana pamwe isu chete rant nezvazvo zvinonzwika kuti isu. Chokwadi kutambisa mashoko. Just rapera svondo, Ndakanga vachinyunyuta kuti mudzimai wangu pamusoro chinhu chete rakanga ini kunetsa chaizvo uye ndakanga hanya. Zvino vasati vachibvumirana kana kupa zano chero, iye chete akandibvunza nyore, "Wati ainyengetera nezvazvo?"Zvino mhinduro pasina. Ini kunge kutaura Mwari nezvazvo. Izvozvo zvingadai kunge nani kushandisa mashoko angu.
Kazhinji venting chaanoitira kupfuura kutiita madder. Zviri kutambisa mashoko dzimwe nguva. Asi kutaura Mwari haasi matongo mashoko. Hapana nani kushandisa mashoko ako. kwete Tiri kudzora, asi iye. Saka kana tichida kubatsirwa, panzvimbo kungova anopenga, tinofanira chete kutaura Uyo ari mutarisiri. Uye kana zviri zvakatinakira uye kubwinya kwake, Achaita kutipa chikumbiro chedu.
Vamwe vedu tingava kusakakavadzana. Uye kana tine nyaya munhu, isu zvaenda kune munhu kutora nokuuchengeta. Tinofanira kuyeuka kuti kutaura kuna Mwari pamusoro ezvinhu kunokosha zvikuru uye inobudirira pane kutaura mumwe munhu. Taura Mwari pamusoro wako ndeyeukama nyaya usati kutaura mumwe munhu. Womukumbira kuti akubatsire uye nyasha nenjere. Bvumira kurema vachitaura Musiki wako kudhakwa iwe uye kukubatsira kufunga zvakajeka.
Uye hatifaniri chete kushandisa mashoko edu kukumbira Mwari kuti zvinhu. Ndicho chikonzero tine ose mangwanani Sunday munyengetero yokurumbidza. Tinofanira chete ndinomurumbidza dzimwe nguva. Tinofanira kuuya pamwe nemamwe nzira kuimbira Vake. Kungogumira, "Iye akanaka. Mazvita Mwari. "Mwoyo yakazara nokuda Mwari awana nzira itsva uye zvikonzero itsva nokurumbidza Mwari zuva rimwe nerimwe. Ndiye akafanira kurumbidzwa kwedu.
II. Udza Good News
Ini handigoni kufunga chinhu nani kuudza mumwe munhu, kupfuura Good News. Mwari akataura mumazuva ano okupedzisira kuburikidza neMwanakomana wake, Jesu Kristu. Uye tinofanira kuudza vamwe nezvake uye chii zvaAkaita.
Romans 10 rinotiudza kuti, "Kutenda kunouya kuburikidza nokunzwa, uye kunzwa neshoko raKristu." Uyu ndiwo sei Mwari anoponesa varume nevakadzi. Pavanonzwa Vhangeri uye kugamuchira nerutendo.
Ndinoda kuti chimbofunga kuti chii munhu muupenyu hwako anofanira kunzwa Gospel. Ko imwe nhengo yemhuri, munhu wandaiziva, muvakidzani, rokugera, chiremba? Chii munhu muupenyu hwako anofanira kunzwa Gospel?
Zvakanaka kuti tishandise mashoko edu kuvaka ukama uye bvumirana neshamwari dzedu dzisiri dzechiKristu. Zvakanaka kwavari kuti vazive unodzida. Asi zviri kurwadza kana tisingambotauri mova yoenda chokuudza Gospel navo. Zvingava ndichiiparadza kana taiva 10 kukurukura pamusoro zvematongerwo enyika, asi kwete nomumwe pamusoro Gospel. Zvingava pokudengenyeka kana taiva kukurukura pavhiki pamusoro nemitambo, asi kumbova chero nyaya nezvaJesu. Zvino ndiri kutaura pamusoro pachangu.
Recently, Ndaiva nhengo dzemhuri kufa. Uye pose kuti zvinoitika, Rinondiyeuchidza, kuti dzimwe nguva zvakanaka kumirira, asi dzimwe nguva ndinofanira kuudza vabereki nezvaJesu izvozvi. Ndinoziva kudarika kwangu hamugoni chinangwa urongwa hwaMwari, asi izvozvo hazvirevi ndinofanira kuva vasingateereri. Uye unotofanira, kutevera kutungamirira kweMweya, asi muzive kuti Haafi kunotisvitsa kubvisa zvinhu rinoda kunzi ikozvino. Udza Good News.
Izvi hazvirevi kuti unofanira kuva kwedu chete kusakarongeka nevasiri vaKristu. Asi zvinoreva kuti anofanira kuitika. Pamwe tinofanira vazviise kuchechi uye kushandisa mharidzo sechinhu nezvekutanga kuti Pedhi kutaura nezvazvo. Zvichida isu kunongedzera kuti wakanaka bhuku kana CD kuti anotaura pamusoro Gospel (ahem, zvangu). Tsvaka nzira kuudza Gospel.
III. Vaka Vamwe (G- nyasha)
Musarega hurukuro chero kunaka kubuda pamiromo yenyu, asi chete chii zvinobatsira pakuvaka vamwe maererano nezvavanoda, kuti kubatsira vaya vanoteerera. (Ephesians 4:29)
Izvozvo zvinofanira kuva zvinonakisa kutungamira kuti mashoko edu vamwe vanhu. Chete chii zvinobatsira pakuvaka vamwe. Kufanana ambotaurwa Ndakati, Mashoko edu akafanana sando. Tinogona kuputsa zvinhu kana kuvaka zvinhu. Uye pane matani nzira kuvaka vamwe.
Jesu anotiudza kuti munhu haararami kure nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Mwari ataura mashoko anokosha. Uye tinofanira kuva wölf mashoko anokosha aya kune mumwe mukana ose tinowana.
Imwe nzira iri kurudziro. Ndinofunga ichi chinhu CHBC anoita chaizvo zvakanaka. Chaizvoizvo ini nomudzimai wangu ukabatwa takarivara patakatanga akasvika. "Ko ivo chete neni kukurudzira pamusoro ndakamubvunza mubvunzo?"Up pasi kurudziro iyi zvinotaura. kusimbisa vamwe. Vaudze pamunoona kuratidzwa nyasha dzaMwari muupenyu hwavo. Wokusimbisa rudo rwako kwavari. Wokusimbisa rudo rwaMwari kwavari.
Imwe nzira arikuti mumwe. Hatifaniri kufunga "avake" rinoreva zvakafanana akanaka, kurudziro vachiridza Mashoko. Dzimwe nguva kuvaka anotarira akafanana Kurairwa, kana kururamiswa. Dzimwe nguva sokunge Zvakaoma hama kana hanzvadzi uye achivadaidza kupfidza chivi. Uyu ndomumwe zvinhu takaita kuzvipira mumwe kuita - kufamba mumwe munguva dzakanaka uye pazvainge.
Uye isu zvichaitika kuti achipfuura yakaoma sezvo chechi izvozvi. Uye tinofanira vaviri kukurudzirwa uye mashoko akaoma. Kurudzirai hama dzako nehanzvadzi Gospel. Uvayevudzire uchangamire hwaMwari uye kunaka kwake uye zvipikirwa zvake. Uyewo kukwikwidzana hama dzako nehanzvadzi kurwa kwakanaka kwokutenda zvakanaka, kuti tirambe tichivimba Jesu. Tinoda kuti.
Imwe nzira yaunogona kuvaka vamwe ndeyokuvapa zano rakanaka. Chinonyanya akura VANOTONGA ndeavo havasarudzi ari ega. Iva iripo kunzwa kuitika muupenyu mukoma wako kana upenyu hanzvadzi. Uye kuvabatsira kufunga achishandisa sei Mwari aizova navo sei. Uye kupa zano zvebhaibheri.
Kune rimwe divi, sechechi, tinoita basa chikuru chokuziva zvakanaka zvomudzimu nyaya. Pane rimwe divi, hatifaniri kutya kutaura kunze kwaJesu zvinhu. Tinogona kutaura nezvoupenyu, uye tinogona kutaura pamusoro nemitambo, chete kuzviita nenzira chinokudza Mwari.
Vamwe unofanira kurega kutaura zvikuru uye vamwe vanofanira kutanga kutaura zvakawanda. Vamwe vedu vanoda kuti anokurumidza kunzwa. Vamwe vedu kumbobvira kushandisa chero mashoko. Uye tinofanira kuita zvakawanda. Taura. Mwari ari kushanda muupenyu hwako uye tinoda kunzwa nezvazvo. Regai mashoko ako ose anofanira hwokuratidza rudo. Munyengetero wangu kuti CHBC aizova chechi inozivikanwa nemashoko rudo.
Sezvo muchitsvaka kushandisa zvawakanzwa manheru ano, regai kuita chikanganiso kungoedza arambe zvaunotaura uye kungoedza kuita nani. Usangoti vazoita ichi chete ari kunze.
Sezvatinoona kwokutanga mundima, chii kuunganidzirwa mumwoyo yedu chinobuda. Hatifaniri kufunga pane patsanura pakati mwoyo uye rurimi. Saka kuchengeta zvinhu zvakanaka mumwoyo mako uye anoiona nokupararira. Uye kana tikadaro, pano sei isu tinofanira kuedza kushandisa mashoko edu.
Nzira chaiyo kutarisa mashoko ako ndiwo kurinda mwoyo yenyu nokuti vanenge zvikuru ivo zvakabatana. Pane rakananga mutsetse kubva pamoyo rurimi. Watch mwoyo wako, uye nokuita kuti, tarisa Words dzenyu. Uye itai zvose izvi nokuona Shoko.
francismewa • Mbudzi 22, 2014 pa 3:10 ndiri • pindura
zvakanaka kuverenga pamusoro kukosha mashoko . Handina ambotaurwa zvinhu zvakanaka kubva ichi , Ndinokutendai nokuti mashoko akanaka
nemanic • Kukadzi 3, 2015 pa 3:43 ndiri • pindura
iri rinotyisa kwazvo. kana chete munhu wose kuti kuverenga, kunzwisisa uye kutevera mitemo, nyika yaizova nzvimbo iri nani kugara.
nyemwerera • Gumiguru 24, 2015 pa 9:22 ndiri • pindura
tinoshandisa mashoko zvizhinji
Rita • Mbudzi 4, 2015 pa 4:25 pm • pindura
Iyi yaiva nguva chidzidzo kwandiri. Vaitaurirana pamusoro ichi nyaya chaizvo manheru ano pane Bhaibheri. Tendai Mwari zvokuswedera kwandiri website yako uye Tendai Mwari kushandisa kuti kutsanangura shoko rake munzira chakajeka uye zviri nyore.
Mwari Bless Service wako!
Barbara • Kukadzi 5, 2016 pa 6:03 pm • pindura
Words Zvechokwadi zvinokosha. Good Info. Ndapota tora nguva kushanyira Website yangu Mwari akapawo ini ushumiri kudzidzisa vamwe pamusoro kukosha mashoko.
Taurai: Mashoko zvinenge hafu chokwadi munhu kana asina kupfuura
Taurai: 2016 In Review – My Job Hunting Experience | The SharePoint Effect
Taurai: Words – Banana Wifey
Taurai: paridza / rangariro / James 3 / Simba The Word